आलु आफ्नो क्षेत्रहरू, धेरै माली मा हुर्केका छन्। र यो संस्कृति को हेरविचार सामान्यतया बल धेरै लिन्छ कि कुनै गोप्य छ। निस्सन्देह, तपाईं, रोपेर सक्नुहुन्छ पहाडी र आलु खन्न र स्वयं। तर राम्रो अझै पनि यो उद्देश्य विशेष उपकरण लागि किन्न - टिलर। यो यस्तै उपकरण अपेक्षाकृत सस्तो छ हुनुपर्छ। हो, र सबै भन्दा यस विशेष साइट मोडेल लागि उपयुक्त सजिलै आज चयन, छैन। उदाहरणका लागि, एक धेरै राम्रो एक यस्तो प्रविधी, धेरै माली र किसानहरु विश्वास किसान Pubert Primo।
यो लोकप्रिय मोडेल फ्रान्सेली कम्पनी Pubert उत्पादन गर्छ। Chantonnay शहर मा 1840 मा - यो दृढ स्थापित एक लामो समय पहिले थियो। सुरुमा कम्पनी उत्पादन उपकरण को घोडा संग प्रयोगको लागि डिजाइन। आज, कम्पनी प्रति वर्ष Cultivators एकाइहरु बारेमा 200 हजार उत्पादन गर्छ।। बजार मा उदाहरण, संकुचित, पारिस्थितिकी, जुनियर लागि यस्ता शासक आपूर्ति।
यो दृढ cultivators Primo श्रृंखला, लेख छलफल गरिने उत्पादित, उपकरण को अर्ध-व्यावसायिक प्रकार को एक समूह हो। यो दायरा मा लागत मोडेल महंगा छ। तथापि, तिनीहरू केवल उत्कृष्ट प्राविधिक विशेषताहरु, साथै धनी कार्यक्षमता छन्। Pubert Primo मोडेल धेरै युरोपेली र एसियाली देशहरूमा आपूर्ति गर्दै छन्। आफ्नो घरेलू र किसान र माली किन्न मौका छ।
श्रेणी को एक सिंहावलोकन
अन्य श्रृंखला Primo मोडेल देखि Cultivators प्रबलित फ्रेम संरचना को उपस्थिति मा मुख्य फरक। यो प्रविधी व्यावसायिक समर्थित मोटर्स स्थापित छन्। विभिन्न संशोधनहरू पावर मोटर्स देखि56.5 एल / को दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ। 2500 घण्टा केही अवस्थामा तिनीहरूलाई स्रोत।
यो श्रृंखला को cultivators मा "सुबारु", "होन्डा", "स्ट्रैटन" जस्ता ब्रान्डहरु को इन्जिन स्थापित गर्न सकिन्छ। यो उपकरण युग्मन शाफ्ट संग एक बेल्ट प्रयोग गरिन्छ। Reducer यी cultivators श्रृंखला मा स्थापित। यो माध्यम ले, कटर 95% इन्जिन शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। यो, बारी मा, मोडेलहरू र उनको प्रदर्शन को दक्षता बढ्छ। यो प्रविधी प्रयोग गरेर धेरै गहिराई हुन सक्छ देशमा खेती।
किसान कटर एक विशेष पर्दा जुडनार संग मिलाएका छौं। उत्तरार्द्ध एक विशेष डिजाइन छ। कारण यो गर्न, गर्मी निवासी मा मिल्स को स्थापना समय एक न्यूनतम लाग्छ। कुनै अतिरिक्त उपकरण, कुनै पनि मामला मा, यस कार्यका प्रदर्शन गर्दा प्रयोग पर्दैन। Primo श्रृंखला cultivators संग काम उल्टो गियर मा सहित हुन सक्छ। यो निकै पुग्न गाह्रो ठाउँमा क्षेत्र वा बगैचा मा भूमि को खेती सुविधा। उदाहरणका लागि, यी अर्ध-किसान को ब्रश र बाड नजिकै हलो धेरै सहज प्रयोग गरेर। साथै, लाइन मोडेल उल्टो गियर उपस्थिति निकै सहनुपरेको सरल।
यस श्रृंखला को cultivators को डिजाइन, अन्य कुराहरु, समावेश गरिएको छ, र स्टेरिड़। यो वाहेक तपाईं आराम जहाँ यो क्षेत्र प्रक्रियाका सम्म भण्डारण गरिएको छ को मोडेल ओसारपसार गर्न अनुमति दिन्छ। को टिलर रोल, को पाङ्ग्रा धन्यवाद, बस बगैचा गाडी रूपमा हुन सक्छ।
राम्रो समीक्षा truckers र किसान, यी cultivators यो, पाठ्यक्रम, पहिलो र मुख्य तिनीहरूको विचारशील डिजाइन र प्रयोग मा सजिलो को लागि योग्य हुनुहुन्छ। तसर्थ, आवेदन प्रक्रिया Pubert Primo को ब्यान्ड चौडाइ 30 90 सेमी को दायरामा समायोजित गर्न सकिन्छ। यी cultivators को अपरेशन धेरै लामो समय, यो तात्दै छैन। एकै समयमा तिनीहरूले कार्यक्षमता मा धनी छन्। निर्माता संलग्नको सबैभन्दा विभिन्न प्रकार प्रयोग गर्न मौका प्रदान गरेको छ। आवश्यक माली किसान, उदाहरणका लागि, एक हलो, HILLER, आलु गर्न निश्चित हुन सक्छ।
सुविधा लागि, cultivators Pubert Primo पनि सुविधाजनक ह्यान्डल डिजाइन प्रदान। विशेष लीवर संग घुमाइयो र कुनै पनि स्थितिमा निश्चित गर्न सकिन्छ। यो, को पाठ्यक्रम, निकै मिसिन को प्रयोज्य सुधार गर्छ।
प्रदान विशेष जोड Primo cultivators को रियर मा। यो संग, काम गहिराई नियमन छ। यो सूचक समेत आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न कुनै पनि प्रयास Primo अपरेटर हुनेछैन यस्तो गहिरो प्रक्रिया संग एक 32 सेमी स्थापित गर्न सकिन्छ।। क्षेत्र मा मिसिन "त्यहाँ एक छ" र यो मामला मा यो धेरै सजिलो छ।
एक किसान संग काम
निस्सन्देह, तपाईंले यो प्रविधी संग काम सुरु गर्नु अघि, तपाईं ध्यान दिएर सँगैको निर्देशन जाँच्न गर्नुपर्छ। किसान Pubert Primo एकदम सरल प्रयोग गर्न। तर, जब काम तिनीहरूलाई अझै पनि केही नियम पालन गर्न हुनेछ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, मेशिन को चट्टानी भू-भाग मात्र कम गति मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंले यो किसान संग र उच्च इन्जिन गति मा काम गर्न सक्दैन।
यो श्रृंखला, साथै अन्य कुनै पनि रूपमा मोडेल सञ्चालन गर्दा सबै, अपवाद बिना स्क्रू र पागल कडा छन् डिजाइन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। इन्जिन अनुमति छ जब भण्डारण ठाउँ यी cultivators परिवहन। को ट्रेलर निर्माता मा उपकरण बोक्न पनि सिफारिस गरिएको छैन। cultivators राख्न सुक्खा ठाउँमा हुनुपर्छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय परिमार्जन
सबैभन्दा प्राय किनेको प्रजातिहरू cultivators Pubert प्राइमा हो:
यी मोडेल रूस सर्वश्रेष्ठ को अवस्थामा आफूलाई सिद्ध गरेका छन्।
टिलर Pubert प्राइमा 65B D2: विवरण
यो मोडेल विशेष अप 1500 मा m2 को कुमारी क्षेत्रमा निर्माता प्रयोगको लागि विकास गरिएको छ। Pubert प्राइमा 65B D2 विश्वसनीयता र प्रदर्शन इन्जिन ब्रान्ड Briggs र स्ट्रैटन म / सी संग सज्जित Cultivators यी इन्जिन शक्ति 6.5 एल / s छ। पनि संरचना को संशोधन मा वायवीय क्लच "चिल्लो सवारी" प्रदान। कक्षा मोडेल प्राइमा 65B D2 सबैभन्दा शक्तिशाली र फलदायी छ। यसको ज्यादातर सानो र मध्यम आकारको किसान प्राप्त। Cottagers एक किसान दृष्टिकोण हुनेछ साइट पर्याप्त साँच्चै ठूलो थियो भने सम्भवतः मात्र।
इन्धन ट्यांक क्षमता 3.6 एल मोडेल छ। यो टिलर 50 किलो वजन। यसको लागि मूल्य, को विक्रेता आधारमा 35-40 हजार हुन सक्छ। पी пары фрез , сошник, диски защиты растений. cutters, coulters, क्रप सुरक्षा डिस्क तीन जोडी किसान समावेश छन्।
truckers cultivators 65B D2 समीक्षा
пневмосцепления. गर्मी कटेज प्रशंसा मालिकको pnevmostsepleniya उपस्थिति लागि भनेर मोडेल, पाठ्यक्रम, सबै को पहिलो। культиватора Pubert Prima 65B D2 переключаются на самом деле очень плавно. प्रसारण cultivators Pubert प्राइमा 65B D2 स्विच वास्तवमा धेरै सजिलै छ। यो मिसिन एक ब्रेक-मा, को पाठ्यक्रम, उपभोक्ताहरु को राम्रो समीक्षा पनि कमाएका जो, लागि आवश्यकता छैन। यो मोडेल को लाभ धेरै गर्मी आगंतुकों समावेश यो दुवै सुक्खा र भिजेको जमीन को प्रक्रिया संग copes कि र। कुमारी भूमि अनुभव किसानहरु को पाराले जोतेर यो चरम किसान कटर मा लिन सल्लाह छन्। Spud आलु, धेरै सिफारिस कुनै विस्तार, एक साना चौडाई मा।
अवलोकन किसान Pubrt प्राइमा 55HC2
यो संशोधन अंश प्रशोधन 60-80 हेक्टर लागि हो। मोटर कार सुसज्जित को 5.5 एल / को होन्डा gx क्षमता संग। एक पेट्रोल किसान Pubert प्राइमा 55HC22लिटर बराबर मा ट्यांक। यो मोडेल 58 किलो वजन। यसलाई समावेश 8 मिल्स छ। यो सस्ता एक बिट टिलर 55HC2 थप शक्तिशाली मोडेल 65B D2 हुनुपर्छ।
किसान Pubert प्राइमा 55HC2 समीक्षा
нение у дачников об этом оборудовании сложилось на самом деле очень неплохое. यो उपकरण बारेमा truckers देखि एम nenie धेरै भएको राम्रो थियो। धेरै माली अनुसार, यो सुविधाजनक छ, यसको प्रयोग संग भूमि हलो। यी cultivators को pluses गर्न सबैभन्दा किसानहरु धेरै लामो सेवा जीवन लिन। घरेलू बजार मा Pubert मोडेल एक लामो समय को लागि देखियो। र धेरै truckers तिनीहरूले सजिलै पहिले नै 5-8 वर्ष काम। तर यो उपकरण र एकदम गम्भीर drawback छ। ремень для культиватора Pubert Primo , как и некоторых других моделей этого производителя, найти в случае необходимости замены будет очень сложно. किसान Pubert Primo लागि ड्राइभ बेल्ट, साथै यो निर्माता केही अन्य मोडेल, आवश्यकता को मामला मा प्रतिस्थापन गर्न धेरै कठिन हुनेछ।
किसान Pubert एमबी लुत्फ
संशोधन cultivators Primo लाइन माथि वर्णन एक उच्च क्षमता र व्यापक कार्यक्षमता छ। तर, यो उपकरण को यस श्रृंखला एकदम महंगा छ। र यो अवश्य छैन सबै cottagers किन्न सक्छन्। इच्छित भने, मालिक उपनगरीय क्षेत्र र कम शक्तिशाली, तर फ्रान्सेली निर्माता Pubert एक सस्ता प्रविधी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
Pubert MB FUN. उदाहरणका लागि, कटेज को मालिक एमबी लुत्फ Pubert किसान ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोडेल स्थापित इन्जिन शक्ति होन्डा GCV 4.5 एल / s। किसान एमबी लुत्फ मा इन्धन ट्यांक 1.1 लिटर छ। यो 30 हजार को दायरामा यो मोडेल छ। पी
मोडेल Pubert एमबी मजा समीक्षा
किसान बारेमा राय माली राम्रो थियो। संयंत्र चाँडै मोडेल र काम यसको प्रयोग सुविधाजनक संग क्षेत्रमा। खराब गियर डिजाइन - तथापि, truckers अनुसार, यो किसान एक एकदम गम्भीर दोष छ। काटन गियर को यो संशोधन को Cultivators। तिनीहरूलाई यो किट मा यो धेरै महंगा छ।
डिल: रोपण र हेरविचार। मौलिक नियम
माटो लागि मल जस्तो सेतो तोरी
टी-34: पुस्तिका। टी-34-85: हाइड। टी-34-3: हाइड
सार्दै ... बजार मा चयन गर्न के
सार सोचाइ - परिचित विषयहरुमा थप कुरा हेर्न क्षमता
अटलांटिक sturgeon: वर्णन, प्रजाति र वासस्थानमा
Aleksandra Nevskogo गिरजाघर (नोवोसिबिर्स्क)। नोवोसिबिर्स्क मा आकर्षण, फोटो